Ọnyà Ududo | È Kere Ya Eke?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
UDUDO a e sere ebe a na-anọ n’ụlọ. Ọ na-akpa ọnyà n’ahụ́ ájá, si n’elu ruo n’ala. Ebe elu ya na-esi ezigbo ike. Ebe ala ya anaghị esi ike. Ihe ebe elu ahụ jidere anaghị enwe ike ịgbapụ. Ma, ebe ala ya jide ihe, ọnyà ahụ na-adọbi segoo ihe ahụ elu. Olee otú ududo si akpa ọnyà ya, ebe elu sie ike ebe ala agaghị esi ike?
Ọnyà ududo: ebe siri ezigbo ike
Ihe Ị Ga-echebara Echiche: Ududo chọọ ịkpado ọnyà ya n’ahụ́ ájá ma ọ bụ n’uko ụlọ, o nwere ihe na-anya anya ọ na-eji akpa ya. Ihe ahụ ga-eme ka o sie ezigbo ike ka ọ ga-abụ ihe ọ bụla na-efe efe gafee ebe ahụ, ya ejide ya. Ndị ọkachamara nọ n’otu mahadum dị n’Amerịka chọpụtara na ihe ududo ji akpa ebe ahụ na-adị n’ala dị iche na ihe o ji akpa ebe nke elu. Ọ na-akpa ebe nke ala otú ọ ga-adịrị ya mfe ịdọbi ka o nwee ike isere ihe ọnyà ahụ jidere gbagoo elu.
Ọnyà ududo: ebe na-esighị ike
E kwuru na ndị ọkachamara ahụ amalitela ilere ihe ahụ ududo ji akpa ọnyà ya anya na-arụ ihe na-anya anya nke ga-esi ezigbo ike ka ọnyà ududo. Ndị ọkà mmụta sayensị nwekwara nchekwube na ihe ahụ ga-enyere ha aka ịrụta bandeeji ga-esi ezigbo ike nakwa ihe ha ga-eji na-agba ọkpụkpụ.
Gịnị ka i chere? Ì chere na ududo nọkatara jiri aka ya na-akpa ọnyà ya otú ọ ga-esi ike n’elu ma ghara isi ike n’ala? Ka ì chere na e nwere onye kere ya?